Hay’ada Islamic Relief oo qaadaysa Zakat Al-fitr | Somaliska
Iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadan ayaa Muslimiinta Sweden waxaa dhibaato ka haysataa cidii ay siin lahaayeen iyo qaabkii ay u bixin lahaayeen Zakat Alfitriga.Oo waajib ku ah in ay bixiyaan ka hor salaada ciida ee ku aadan dhamaadka isbuuca soo socda.
Hay’ada caalamiga ah ee gargaarka bani’aadamka Islamic Relief ayaa soo daabacday macluumaad ku saabsan qaabkii loo bixin lahaa lacagta Zakat Al-fiktr. Hay’ada ayaa ku dhawaaqday in la bixinayo 75 KR qofkii oo lagu soo dirayo koontooyinka ay u diyaarisay barnaamijkaan. Hadaba cidii doonaysa in ay bixiso lacagta Zakat Al-fiktriga ayaa waxay ku diri karaan koontooyinka hoose ee ay leedahay Islamic Relief ama waxay booqan karaan bogga hay’da oo ay toos uga bixin karaan.
Asc/dhaman wadku mahadsantahay walal lkn hadan lacag anan awodin ama dabcan anan heysan beso aniga zakatul fidriga sikale ma ubixin kara o hay.ada rashin ma ubegikara,
nin muslim ah magaran wayo sidi uw u bixin lahaa wajibat kisaa headahaa waxaas ayey ka faidestan waa tugo lakin waxan kutalin lahaa in qof walbo u dhibo somaali sidi ow udiri jiray lacaktaa bila kadibna laga bixiyo somaali